निशाको फोटो देखेर रेनशा रुष्ट किन ? - HAMRO YATRA
निशाको फोटो देखेर रेनशा रुष्ट किन ?
काठमाडौं । नायिका निसा अधिकारीले आफनो अफिसियल फेसबुकमा एउटा तस्बिर पोस्ट गरेपछि कोरियो ग्रफार रनशा राई रुष्ट बनेकी छन् । निसाको फोटो सार्वजनिक हुँदा रेनशा रुष्ट हुनुको कारण हो कोरियाग्राफी स्टाइल चोरिनु ।
नायिका निशाको सार्वजनिक उक्त तस्बिरले कम समयमा सबैको ध्यान खिचेको छ । यो तस्बिर को कम ब्याक रहेको चलचित्र ‘जय पर्शुराम’ को एउटा गीतको तस्बिर हो । जुन तस्बिरले सफल चलचित्र ‘प्रेम गीत’ को ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ गीतको याँद दिलाउने अनुमान गरिएको छ । चाडै नै गीतको भिडियो सार्वजनिक हुने जानकारी दिँदै निसाले सार्वजनिक गरेको तस्बिरमा कुनै जंगलको विचमा परि जस्तै देखिएर नायिका पियानो बजाइरहेकी छिन् ।
यस्तै सिन र कोरियोग्राफी चलचित्र प्रेम गीतमा गरिएको थियो । त्यसैले ‘जय पर्शुरामले’ प्रेम गीतको कपि गरेको हुन सक्ने अनुमान लगाइन थालिएको छ । गीतको लोकेशन , पहिरन र शैलीसमेत उस्तै देखिएपछि उक्त गीतका कोरियोग्राफर रामजी लामिछाने माथि नै प्रश्नहरु तेर्सिएका छन् । तर एक दृश्य मिल्दैमा प्रेम गीतको कपि गरेको भनिहाल्ने अवस्था छैन । किनकी ‘जय पर्शुराम’ को उक्त गीत सार्वजनिक भईसकेको भने छैन् ।
तर पनि प्रेम गीतकी कोरियोग्राफर रेनशा राईले भने आक्रोस पोख्दै प्रभावित हुनुको पनि हद हुन्छ नी भन्दै अभिव्यक्ति दिएकीछिन् । तर कोरिया ग्राफर रामजी लामिछानेमाथि तेर्सिएका आरोपहरु भने‘जय पर्शुराम’ को गीत सार्वजनिक भएपछि नै पुष्टी होला ।
माडी गाउँपालिका का सबै विद्यालयमा विद्युतीय हाजिरी मेसिन जडान .
रोल्पा , शिक्षकहरुको कामलाई चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन रोल्पाको माडी गाउँपालिका का सबै माध्यामिक विद्यालय र आधारभूत तह (नि.मा.वि) ...
आलिताल गाउँपालिकाको कार्यालयमा डिजिटल सूचना पाटी जडान
सर्वसाधारणलाई गाउँपालिकाले सम्पादन गर्नुपर्ने र सम्पादन गर्दै आएका गतिविधिलाई सहज ढंगले जानकारी गराउने उद्धेश्यका साथ डिजिटल नागरिक वडापत...